साहित्यकार कृष्ण धरावासी,(खसखस डट कम)
१८ पुराणहरु आपसमा कुन विषयमा बाझिएका छन् र कसरी?
कुनै ठाउँमा मूलपात्र राधाभन्दा सशक्त पात्र एकनॅशाको औचित्य के हो?
लीला लेखनमा पात्रहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ?
सामाजिक संजालमा राधाबारे उठेका प्रश्नहरुलाइ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?
झापाबाट काठमान्डौ पसेपछि त्याग्नु भएका विचारहरु के थिए?
तपाईंलाइ मदन पुरस्कार दिलाउने साझा प्रकाशनप्रति तपाईंको असन्तुष्टि के हो?
तपाईंको दोश्रो विवाहपछि तपाईंप्रति व्यक्त गरिएका प्रतिक्रियाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?
लगायत अन्य विभिन्न प्रसंगहरु प्रस्तुत छ |